यो हो, प्रधानमन्त्रीले ईश्वर पोखरेलको मन्त्रालय खोस्नुका तीन कारण -यो हो, प्रधानमन्त्रीले ईश्वर पोखरेलको मन्त्रालय खोस्नुका तीन कारण -
२८ आश्विन २०७७, बुधबार १९:११ मा प्रकाशित
काठमाडौं । लामो समयको चर्चा/परिचर्चापश्चात अन्ततः मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार र हेरफेर गरेका हुन् ।
पछिल्ला केही महिनादेखि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको आन्तरिक विवादकाबीच बुधबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको छ । पार्टीभित्र आकांक्षि देखिएका र चर्चा चलेकोभन्दा केही भिन्न तरिकाले प्रधानमन्त्री ओलीले यो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्दै आएको उप–प्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीप्रधानमन्त्री ओलीले आफैं राखेका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मानिएका पोखरेल अन्ततः पछिल्ला केही विवाद श्रृङ्खलासँगै मन्त्रिपरिषदबाटै विदा भएका छन् ।
‘हुने हार, दैव नटार !’ भन्ने नेपाली उखान यतिबेला नेकपाको राजनीतिक सरगर्मीभित्र भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका निकट मानिने पोखरेलले यो पटक भने ओलीलाई फकाउन सकेनन् । पटक–पटक पोखरेलले गरेका विभिन्न विवादीत कामहरुको कारण ओलीलाई असजिलो पर्दै आएको थियो । अझ पछिले समय त उनको कार्यशैलीका कारण सेनासँग समेत सम्बन्ध बिग्रिएको टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
अन्ततः उनले सम्हाल्दै आएको रक्षा तथा उप–प्रधानको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय तानेका छन् ।
उता, ‘बालुवाटार काण्ड’देखि नै विवादित भइसकेका विष्णु पौडेलले भने पार्टीदेखि सरकारसम्मको जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका निकै नजिक र विश्वासका पात्र मानिने पौडेल यसअघि बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाको महासचिवको भूमिकामा रहेका पौडेललाईओलीको अर्को ‘बक्सिस’ मिलेको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा हुन थालिसकेको छ । आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा निकटतमहरुको भेला गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अझै चतु¥याईं गरेका छन् ।
दुई वटा मन्त्रालय धानेर बसेका पोखरेललाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन‘ फायर’ गरे ? यसअघिका विभिन्न प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री ओली पोखरेलसँग रुष्ट थिए । पोखरेलकै कारण सरकार विवादित भएका धेरै काण्डहरु ओलीले ‘फेस’ गरेका छन् । ओलीले पोखरेलको मन्त्रालय खोस्नुका तीन कारण हेरौँ ।
१. विवादको श्रृङ्खला
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरिय समितिको संयोजक पोखरेल भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली स्वयः आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भइरहेको बेला पोखरेल उपप्रधानसमेत सम्हालेर बसेकाले निर्धक्क उनले संयोजकको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
जिम्मेवारी पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत जोडिने गरि ‘ओम्नी प्रकरण’ सार्वजनिक भएसँग ओलीले त्यतिबेलै उनलाई मन्त्रिपरिषदबाट हटाउने इच्छा देखाएका थिए । पोखरेलकै दबाबमा विवादित ओम्नी कम्पनीलाई औषधि र उपकरण खरिदको जिम्मा दिइएको चर्चामा आयो । जुन कम्पनीले महँगोमा गुणस्तरहीन सामग्री किनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।
पार्टीभित्र उत्पन्न विवादहरुको समाधानका लागि पटक–पटक लविङ गरेका पोखरेल अन्ततः प्रकरणकै कारण जिम्मेवारी खोसिएको छ । ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालयले रद्द गरेपछि उक्त कामको जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो ।सेनालाई जिटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिइएको थियो । तर त्यसमा पनि पोखरेलले आफ्नो मानिस खटाउने चाहना राखेपछि विवाद आएको भनि अर्को विवादमा तानिएका थिए ।
फास्ट ट्रयाकको असफलता
उता, फास्ट ट्र्याकमा पोखरेलले नियुक्त गर्न खोजेको परामर्श विज्ञलाई सेनाले नियुक्त गरेन । खोकना बुङ्मतीमा प्रशासनिक काम रोकेकाले सेनापतिसँग बैठकमा नै चर्काचर्की भएको समेत भनिएको थियो । त्यतिबेला पोखरेलका कमजोरी प्रधान सेनापतिको तर्फबाट प्रधानमन्त्री समेतलाई बिफ्रिङ भएको थियो । त्यतिबेला नै ओलीले पोखरेललाई हटाउने तत्परता देखाएका थिए । तर, पार्टीभित्र विवादमा फसेपछि ओलीले कुनै कदम चालेका थिएनन् ।
२. कोरोना रोकथामको असफलता
त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि आराम गरिरहेकै बेला नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको लागि कदम चानल्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो । त्यहीबीचमा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बनाए । जसको जिम्मेवारी पोखरेललाई दिए ।
तर, पोखरेलको नेतृत्वमा भएको निर्णय विवादमा मात्रै परेन, कोरोना महामारीबारे उनले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको बिफ्रिङ समेत फेल खायो । बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘कोरोनाले महामारी रुप लिँदैन भन्ने रक्षामन्त्रीकै प्रक्षेपण थियो, तर महामारी फैलियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री रष्ट हुनुहुन्थ्यो ।’
३. र, राष्ट्रपतिसँगको विवाद
पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको बढ्दो विवादसमेत पोखरेलको मन्त्रालय खोस्नुको कारक बनेको छ । केही सातादेखि ओली र राष्ट्रपतिबीच आन्तरिक किचलो छ । राष्ट्रपतिसँग निकट बनेर काम गरिरहेका पोखरेललाई ओलीले यहीबीचमा भेट समेत दिएका थिएनन् । पार्टी विवाद र नियुक्ति लगायतमा राष्ट्रपतिसँग ओलीको विवाद मात्रै थिएन, ओली र राष्ट्रपतिबीच दूरी बढाउन पोखरेलले भूमिका निभाएको आरोप समेत छ ।